Bahrain: Ny filàntsika ny Indiana dia toy ny filàntsika rivotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2009 17:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, English
Tany ampiandohan'ity volana ity, nanambàra i Bahrain fa tapitra hatreo ny endrika fanohanana ireo mpiasa vahiny, midika izany fa manomboka amin'ny volana Aogositra dia tsy hiankina amin'ireo mpampiasa azy intsony ireo mpiasa ireo, fa tohànan'ny governemanta mivantana amin'ny alalàn'ny Sampana mpandrindra ny tsenan'asa, àry hahazo alàlana hiova asa tsy ilàna fankatoavana avy amin'ireo mpampiasa azy ireo. Natao izao hetsika izao hanafoanana ny fomba fanohànana tamba-be mpiasa maro fanaon'ny Bahrainis, izay matetika no tonga avy any amin'ireo tany madinika manodidina, izay ampandoavin'izy ireo vola ho “sàran'ny visa” raha toa izy ireo ka manapa-kevitra hiasa aminà mpampiasa hafa.
Nefa kosa ho an'ny sasany any Barhain, izay misedra olana ara-ponenana sy tsy fanànana asa ny mponina ao aminy, miteraka ahiahy ilay hevitra hanamoràna ny asan'ireo vahiny eo an-toerana.
Ny mpitoraka blaogy Mohammed Marhoon no mamaritra trangam-piainana iray tsy ela akory:
Anatin'ny andro migaingaina tao Barhain, tao afovoan'i Manama, teo am-piandrasana ny jiro mavo hirehitra, raha nandalo ireo trondro hamoor [big shots]. Apetrakao amin'ny varavarankelin'ny fiara ny lohanao mba hahazo ny tsioka malefakin'ny milina fampangatsiahana hampisinda ny hatezeranao noho ny fiandràsana ela sy ny daniky ny masoandro. Izany fitsotsorana izany no notapahan'ny Indiana iray tampoka nandondona teo amin'ny varavarankely…tap, tap, tap…
Tamin'ny voalohany dia noheveriko fa te-hivarotra rano amin'ny tavoahangy tamiko izy, saingy tsy nahita aho na tavoahangin-drano iray aza teny an-tànany. Rano mineraly no tiako hambara eto an!, ‘pani’ amin'ny teny Hindi, ary izay ambaran'ny zanak'i Mary [ireo mpiteny Anglisy] hoe “water”, mba tsy ho tratry ny fanontaniana isika na fanamelohana hoe mpikatroka anaty fikambanana mpampihorohoro. Mazava ho azy, novohako ny varavarankely, ary hitako izy mangataka famonjena: “Baba, mahantra aho…tsy manam-bola…Andriamanitra hitahy ny raiamandreninao… mahaaaantra, baba, mahantra aho, baba.” Gaga be aho. Kisendrasendra ve ity, sa misy an-jatony ny toa azy? Tsy hafantoko loatra amin'ny fahantrana sy ny filàna eto, satria misy vondrom-piarahamonina hafa maro tahaka azy miaina manerana an'i Manama, ary tsy mahagaga ny mahita azy ireny – saingy sambany kosa no nahamarihako Indiana nangataka!
Ireo fombafomban'ny andro Zoma…
Ny ora vao misandratr'andron'ny Zoma maraina ao amin'ny souq faritra manodidina an'i Manama dia mahasarika Indiana maro, miaraka amin'ilay volo mifotetaky ny menaka, fitafiana marevaka, ary ireo fankafizan-javatra samy mànana ny azy. Ambohipihaonan'ny kolontsaina sy fombafomba maro samihafa io. Hitanao mifampizara firariantsoa sy orokoroka izy rehetra, avy eo dia mitandahatra hanao ny vavaka mitatao vovonana fanaon-dry zareo. Avy amin'ny lafin-tany rehetra izy ireo, ary amin'ny tolakandro dia miara-mipetrapetraka mankeny amin'ny Bab Al Bahrain, na mitsidika ny elo-drano [fitsangatsanganana eny amoron-drano]. Andro maha-somadodoka ho azy ireo io…
Ny filàntsika ny Indiana dia toy ny filàntsika rivotra
Raha jerentsika akaiky ireo asa maro ataon'ny Indiana ho fanomezana fahafaham-po ny daholobe, manomboka amin'ny tanora indrindra ka hatramin'ny antitra, manasa fiara izy ireny ary mivarotra jasmin eny an-dàlambe, manàngana ireny trano avo manaka-danitra ireny, ireny toeram-pivarotana lehibe sy toeram-pilalaovana ireny, ary misy ny lasa tompon'andraikitra sy mpandraharaha. Na aiza na aiza alehanao dia misy Indiana foana, ary tsy mahagaga izany!
ATM (Milina mpizara vola mibaiko tena)
Hitanao mitandahatra lavabe eny amin'ireny ATM ireny ry zareo, mba hàka ny toe-bolany. Tokony hanome taratasy filazàn-karama ho an'ireo Indiana ireo ny mpampiasa azy ireo mba hanamaivanana ny rarin-tsaina mianjady amin'ireo mpiasany mieritreritra ny hoe , “tonga ary ve izay ny vola?”, “Tsy mbola ao ilay izy”, “Tsy ampy izy izany”, “Tena fangoloka ny mpampiasa ahy”, ary ny “Tena kely [karama vary masaka] izy izany”.
Ny Indiana no foko isan'ny tena miparitaka be indrindra manerana ny tany. Vinavinaina ho 25 tapitrisa ny Indiana miaina ivelan'ny fireneny. Ny be indrindra amin'ireny dia any Bahrain ary miaraka amin'ny famohàna ny varavarana ho an'ny visa maimaim-poana ho an'ny mpiasa, ho sarotra ny teo-draharaha! Toy izay efa nolazaiko, Ity no voalohany nahitako Indiana niteny hoe, “Baba, mahantra aho, tsy misy vola.” Ankarikary be izao izy no nangataka tamin'ireo fiara rehetra nandalo tetsy sy teroa. Tsy asiako fihatsaram-belatsihy, mihevitra aho androany fa tena nanana complexe manoloana ireo Indiana.